Eco-friendly White Kraft Akwụkwọ Ihe oriri Containers
Ọtụtụ mba enyela iwu mmachibido iwu na plastik. N'okpuru ọnọdụ a, anyị na-atụ aro usoro nri akwụkwọ ọcha kraft akwụkwọ mgbokwasị nke nwere ezigbo mkpuchi mkpuchi ọtụtụ ndị ahịa, nke nwere ike igosipụta nri ka mma n'ime igbe ahụ.
A na-emegharị ihe ndị anyị nwere maka ihe oriri na nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, dịka sushi, bento, salad, achịcha, wdg.
Ngwaahịa a na-anabata ndị ahaziri size, udi, obibi akwụkwọ na nkwakọ chọrọ.
Anyị ereela ndị a Italytali, Spain, Canada, Australia na obodo ndị ọzọ. Anyị na-eche banyere ọnụahịa kachasị mma na imepụta ihe iji nyere ndị ahịa aka ịchekwa ego ma nweta oke oke.
Brown Kraft Akwụkwọ Box
Nke a Brown Kraft Akwụkwọ Box Factory ahọrọla ihe ndị dị elu, ụdị dị nro ma dị nro, dị mma ma dịkwa mma, na-arụ ọrụ nke ọma, akara ndị ọzọ. Ọmarịcha ọrụ aka, ọgwụgwọ nkuku zuru oke, mara mma ma na-adịgide adịgide. Ọdịdị mara mma na-eme ka igbe onyinye dịkwuo mma.
CHUNKAI'S Sushi igbe nwere nnukwu uru dị ka n'okpuru:
1.Gooding Sealing maka nchekwa nchekwa
2.Differe iche maka nhọrọ gị
3.Ahịhịa na ihe siri ike
4.Eququisite Design na mara mma ụkpụrụ
5.Antifogging, mma maka ngosi
Corrugated Akwụkwọ Mkpụrụ Box
Nke a Corrugated Akwụkwọ Mkpụrụ Box nwere atọ n'ígwé nke oké corrugated akwụkwọ, ike na inogide. A na-emepụta oghere ndị ahụ iji mee ka ngwaahịa ahụ ghara ire ere. Printingkpụrụ mbipụta mara mma, n'ahịrị na onyonyo nke mango, mara mma ma na-emesapụ aka, welie uru ngwaahịa. Aka ahụ bụ ihe ezi uche dị na imewe, ọ naghị adị mfe ịkwụsị, ọ naghị emerụ aka ahụ. Igbe ahụ dị oke ma sie ike, ngwa nri nri na akwụkwọ FSC, ahụike na gburugburu ebe obibi, nke nwere ike ibute ụkpụrụ FDA, nchekwa na mmetọ -efu. Ọdịdị nke crease na-eme ka ọ dị mfe imeghe ma mechie mgbe ị na-eji ya.
Brown 3 oyi akwa corrugated Pizza Box
Ebipụta Pizza Box dị ukwuu, ụkpụrụ bụ mara mma, na ọ dịghị mfe ịjụ oyi. Ala na-eji ire ụtọ elu, ebipụta nwere ike ahaziri, na venting oghere imewe ana achi achi na Pizza adịghị njọ. Igbe ahụ dị ezigbo ike, akụrụngwa nri, ahụike na gburugburu ebe obibi, nke nwere ike ibute ọkọlọtọ FDA, enweghị nchekwa na mmetọ. Ọdịdị nke crease na-eme ka ọ dị mfe imeghe ma mechie mgbe ị na-eji ya.
Biodegradable Food akpa
Plastic Hair Building Fiber ntụ ntụ Bottle
Nke a Plastic Hair Building Fiber Powder Bottle ugbu a na-hotselling na Asia. Anyị nwere ike ịnye ọnụahịa asọmpi maka karama a, n'ihi na anyị ejirila aka anyị kwalite ma kwalite ya. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ọnụ ala Plastic Hair Building Fiber Powder Bottle, nke a ga-abụ nhọrọ kachasị mma gị .Eresịla m karama a na USA, Russian, EU na mba ndị ọzọ. Anyị na-eche banyere ọnụahịa kachasị mma na imepụta ihe iji nyere aka onye ahịa zoputa ego ma nweta oke oke.
500ml Matte Black Glass Bgba Bottle
Nke a 500ml Matte Black Glass Bgba Bottle bụ mara mma nke ukwuu, kwesịrị ekwesị n'ihi na ụdị nile nke mmiri mmiri. Okpu .Package Gụnyere --- 4 Pack 16 oz Glass Spray Glass with Free Essential Plastic Funnel, 4 Bottle Caps na 8 Pcs akara nzu nzu maka Mixgwakọta, Ngwaahịa nhicha ụlọ. Nnukwu karama 16 ounce Glass Spray Bottle nwere ihe dị mfe ịdọrọ ihe nwere ike ịtọ ma ọ bụ ezigbo iyi ma ọ bụ iyi siri ike. Anyị nwere ike ịhazi agba kalama, tinye akara ma ọ bụ bipụta logo na karama ma ọ bụ okpu.